Nanjary Fitaovam-piadiana Hamelezana Ireo Mpilalao Horonantsary Mamoafady Rosiana Ny Tolotra Famantarana Endrika (FindFace) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2016 10:08 GMT
Sary nampiasaina tamin'ny hetsika doxing (famoaham-baovao momba ny olona iray) tao amin'ny Dvach. Sary: Tjournal.ru.
Nilaza ireo mpandrafitra ny rindrambaiko nanao ny “FindFace,” izay mampiasa rindrambaiko famantarana endrika hifanandrify amin'ny sary hita kisendrasendra amin'ny pejy media sosialin'ny olona ao amin'ny Vkontakte fa natao hanamorana ny fahazoana namana vaovao ny tolotra. Navoaka tamin'ny volana Febroary tamin'ity taona ity ny FindFace ary nanomboka nahazo laza tamin'ny volana Martsa, rehefa nanoratra momba ny fampiasana ny tolotra mba hitadiavana ireo vehivavy roa nalainy sary enintaona lasa izay teny an-dalamben'i St. Petersburg ilay injenieran'ny rindrambaiko antsoina hoe Andrei Mima. (Nangataka taminy izy ireo mba halaina sary, saingy tsy nahazo vaovao ahafahana mifandray amin'izy ireo intsony, ka tsy afaka nizara ny sary tamin'izy ireo, tamin'izany fotoana izany.)
Tany am-piandohana, niteraka ahiahy eo amin'ny fiainana manokana (any an-takonana) ny FindFace. (Na dia tamin'ny torohevitra mamirapiratra nomeny aza, dia noresahin'i Mima ny tahotra fa mampihena bebe kokoa ny fahalalahan'ny olona amin'ny fotoanan'ny aterineto ny tolotra.) Tamin'ny fiandohan'ny volana Aprily, nanasongadina ny firongatry ny teknolojia mety hanohintohina ilay tanora mpanakanto iray antsoina hoe Egor Tsvetkov, maka sary kisendrasendra ireo mpandalo eny amin'ny lalamby (metro) an-tanandehiben'i St. Petersburg ary mampifanandrify ny sary amin'ny pejy Vkontakte-n'ny olona, amin'ny fampiasana ny FindFace. “Ara-teoria,” nilaza tamin'ny RuNet Echo i Tsvetkov fa azon'ny mpamono olona misesy na mpampitrosa mitady ny mpitrosany ity tolotra ity.”
Manantena hanaitra ny saina i Tsvetkov amin'ny mety ho fanararaotana ny fampiasana ny FindFace, heverina ho nanome aingam-panahy ireo manam-pikasan-dratsy indrindra hamantatra sy hanorisory vehivavy Rosiana mipoitra amin'ny sary vetaveta. Tamin'ny 9 Aprily, telo andro taorian'ny tatitry ny fampahalalam-baovao momba ny tetikasa ara-java-kanton'i Tsvetkov, nanatontosa hetsika hamantarana ny anaran'ireo mpilalao sarimihetsika mipoitra amin'ny sary vetaveta ireo mpiseraseran'ny imageboard Rosiana “Dvach” (2chan). Rehefa fantatra ireo vehivavy ireo tamin'ny fampiasana ny FindFace, dia nizara ny dika mitovy ny pejy Vkontakte an'ireo olona ireo ny mpiseraseran'ny Dvach ary nandefa “spam” tany amin'ny namana sy ny fianakavian'ireo vehivavy miaraka amin'ny hafatra mampahafantatra azy ireo ny zavatra hitan'izy ireo. Lasibatry ny ezaka ihany koa ireo vehivavy tao amin'ny tranonkala “Intimcity,” izay manome tolotra fivarotan-tena.
Nikarakara hetsika hamoaka ny mombamomba ireo vehivavy Rosiana mipoitra amin'ny sary vetaveta sy ny tranonkalan'ny fivarotan-tena ny mpiserasera Dvach (2chan).
Nilaza ireo mpiserasera ambadiky ny hetsika famoahana ny mombamomba ireo olona fantatra tamin'ny sary fa fahatezerana ara-pitondran-tena no nanosika azy ireo hanao izany, ary nilaza fa “voakolikoly sy mpamitaka” ireo vehivavy eo amin'ny indostrian'ny firaisana ara-nofo” ireo (Milaza izany ihany, nitaraina ihany koa ireo mpiserasera Dvach fa tsy miraharaha ireo karazan-dehilahy mahabe isa ny Dvach ireo vehivavy ireo.)
Nampilaza ny olom-pantatry ny vehivavy iray tao amin'ny Vkontakte momba ny sariny miboridana ny mpiseraseran'ny Dvach.
Ampahany amin'ny hetsika “doxing” (famoahana ny mombamomba ilay olona any an-takonana) ny fananganana vondrona tao amin'ny Vkontakte, izay heverina hametraka rohy ao amin'ny lahatahiry nozaraina misy ny dika mitovy ny pejy media sosialin'ireo vehivavy ny mpandray anjara. (Natao hiarovana izay vaovao mety ho very izany dingana izany, raha mamafa ny kaontiny ireo vehivavy, na manova ny fisehony amin'ny hafa.) Taorian'ny fitarainana nataon'ny vondrom-piarahamonina anti-seksista, noraràn'ny Vkontakte avy hatrany ny vondrona napetraky ny mpiseraseran'ny Dvach. Mampiseho ity hafatra manaraka ity amin'izao fotoana izao ny pejin'ny vondrona:
Namaly ny Vkontakte. “Nakatona ity vondrona ity noho ny fanafihana pejy na vondrom-piarahamonina Vkontakte.”
Raha niresaka tamin'ny tranonkala TJournal, nilaza ny mpanorina ny FindFace, Maxim Perlin, fa tsy misy fomba ahafahany manakana ny olona tsy hampiasa ny tolotra nataony hamelezana vehivavy amin'izany fomba izany, na dia nanipika aza izy fa heloka bevava ny fizarana tsy ara-dalàna ny sary vetaveta ao Rosia. “Manao ny ezaka rehetra izahay mba hiarovana ny mpiserasera Vkontakte rehetra amin'izay mety ho hetsika fikasan-dratsy ,” hoy i Perlin. “Ary mivonona izahay, raha ilaina, hanome izay vaovao ilaina hamantarana ireo mpiserasera tompon'andraikitra amin'izany fanohintohinana izany.”